DIY asa tanana | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy DIY asa tanana
Ny fomba fanaovana sakafo sy fahatsiarovana avy amin'ny lagenarii
Ny Lagenaria dia famokarana malaza ao amin'ny fianakaviana croquin, izay mamboly ao amin'ny toetr'andro tropikaly sy manitra. India, Afrika ary Afovoany Azia no heverina ho toerana nahaterahan'ny Lagenaria. Io kankana io dia fantatra hatramin'ny olona taloha. Noho ny zava-nitranga dia nampiasaina tamin'ny famokarana menaka ny jirony, dia nahazo ny anarany faharoa izy - takelaka koban-dafarina.
Famokarana tsy miankina amin'ny Fokin flaters
Ny fambolena sy ny fambolena, izay tsy ahodikodinan'ny tany sy ny haran-dranomasina ary miaro ny tany amin'ny fiterahana sy ny maina, dia fantatra hatramin'ny ela (tamin'ny faran'ny taonjato faha-19, nahomby i I. Ovsinsky). Tamin'izany fotoana izany koa, ny fitomboana ny fandaniana sy ny fihenan'ny vola nampiharina dia voarakitra.
Ahoana ny fomba hanamboaran-drazana amin'ny kodiarana: kilasy maoderina mitaiza miaraka amin'ny sary
Maro ireo tompona fiara ao amin'ny garazy manodina ireo kodiarana efa antitra - manipy azy ireo na ny hakamoana, na indray mandeha, na raha tadidiny tsy ho ela izy ireo dia tonga tampoka. Ny kodiarana taloha dia matetika ampiasaina hanamboarana sisin-tany, trano famolavolan'ny voninkazo, fitaovana ara-panatanjahan-tena sy kianja na mamorona ornamana ara-tsiansa ho an'ny zaridaina sy tokotany.
Ahoana ny fomba hanoroana vorona mpihaza
Amin'izao fotoana izao dia sarotra ny mividy na manamboatra ny vorona amin'ny fitaovam-pako. Ary mba tsy hikolokolo izany, dia azonao atao ny manamboatra azy amin'ny endriny isan-karazany. Ny ankizy indrindra indrindra no manasa an'ity dingana ity, satria afaka maneho ny eritreritr'izy ireo eto izy ireo. Andeha hojerentsika hoe inona ny fitaovana afaka mamolavola ny fitaovana, ary inona no tsara kokoa tsy ampiasaina.
Ahoana ny fomba fanaovana ny pelletizer homemade ho an'ny sakafo
Ny karazana biby fiompiana karazan-tsakafo dia mihinana, ny fividianana sakafo dia tsy mora. Amin'izany, maro ny tantsaha no maniry ny manomana ny fifangaroana ho an'ny tenany, ary mba ho feno ny tahiry, aleon'izy ireo manamboatra trano hividianana milina famoronana. Ahoana ny fomba hanamboarana granulator, azonao ato amin'ity lahatsoratra ity.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ DIY asa tanana